Global Voices teny Malagasy » Ny Olan’ny Google Tao Shina · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny Olan'ny Google Tao Shina
Voadika ny 03 Oktobra 2017 4:31 GMT 1	 · Mpanoratra Frank Dai Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka
(Marihina fa tamin'ny 10 Jona 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Nahazo tsikera noho ny tsy fahombiazany tamin'ny fanomezana tolotra tsy mari-toerana ho an'ny mpanjifa Shinoa i Google, ilay maotera fitadiavana goavana indrindra manerantany, noho ny sivana antserasera nohamafisina, na ny Great Firewall of China  (Rindrin'Afo Lehibe ao Shina), nandritra ny fankalazana ny faha-17 taonan'ny Famonoan'olona tao Tiananmen  .
Niverina tamin'ny laoniny  ny Google androany, araka ny nomarihin'i Julien Pain, Lehiben'ny Reporters Without Borders, na ny biraon'ny Fahalalahana Aterineto ao amin'ny RSF, taorian'ny olana ara-pifandraisana nandritra ny roa herinandro. Na izany aza tsy marina loatra ny hiantsoana izany ho fanakanana, satria samihafa avokoa ny vokatra azo'ireo mpisera aterineto ao Shina izay naka ny maotera Google Amerikana dika Shinoa  nandritra ny fotoana sy faritra samihafa. Fa azo natao kosa anefa ny niantso izany ho ” fahatapatapahan'ny fifandraisana  “, araka ny niantsoan'ny Financial Times azy.
Nanolotra ny dika voasivana ao amin'ny Google.cn  i Google, tolotra iray nampiantranoin'i Shina ary voasoratra anarana ao amin'ny governemanta Shinoa, izay nahazo tsikera maro avy amin'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona sy ny tontolon'ny bilaogy  rehefa natomboka tamin'ny volana Janoary. Nandritra izany fotoana izany nanome safidy tamin'ny dika tsy voasivana izy rehefa manoratra ny rohy url “www.google.com” ao Shina. Efa roa herinandro izay no nahafahana nampiasa ny Google.cn. Na dia fantatra aza fa tsy nisy afatsy 1% -n'ny mpisera tao Shina ihany no nampiasa ny Google.cn ho safidin-tolotra Google.
Nanambara i Sergey Brin, mpiara-manorina ny Google fa mety hanimba ny foto-keviny izy ireo  dia ilay teny filamatra malaza hoe “Don't Be Evil ” (aza ho mpanimba), noho ny fidirana tao amin'ny tsena Shinoa. Nanombantombana i Google raha toa ka mifanaraka amin'ny politikan'ny orinasany sy ny foto-kevitr'izy ireo ny fifanarahana, rehefa nodinihina ny mety ho fisintahana amin'i Shina. Na dia nilaza aza ny Reuters fa mijanona ao Shina ny Google .
Ny 8 Jona, nilaza nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mahazatra  ilay mpitondrantenin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Shinoa Liu Jianchao  fa: ” Mandray an-tanandroa ireo orinasa tahaka an'i Google izay te-hiasa ao amin'ny faritra fampahalalam-baovao ao Shina ny governemanta Shinoa, kanefa tokony hanaraka ny lalàna sy ny fitsipiky ny fandraharahana sy ny raharaham-barotra rehetra. Manantena izahay fa hankatoa ny lalàna Shinoa ireo orinasa ireo rehefa hampiroborobo ny fihariana eto Shina “. Nilaza tao amin'ny bilaoginy  i Keso, iray amin'ireo bilaogera fanta-dazan'ny Teknolojian-tserasera Shinoa hoe:
Indeed Liu Jianchao admitted that “it was us(Chinese government) who block Google because they did not obey the law”. But the spokesman will never told the foreigners that which law that Google has violated and which law the blockade is performed according to. The foreigners want explicit clauses in the law for them to do business, but here in China, many things are unspeakable like Zen .
Niaiky i Liu Jianchao raha ny marina fa “izahay (governemanta Shinoa) no nanakana an'i Google satria tsy nankatò ny lalàna izy ireo”. Saingy tsy nilaza mihitsy tamin'ireo vahiny ilay mpitondrantenin'ny governemanta hoe lalàna inona no nohitsakitsahan'i Google ary inona no lalàna nanatontosana ny sakana. Mila fifanarahana mazava ao amin'ny lalàna ho azy ireo hanaovany fihariana ny vahiny, saingy eto Shina, maro ny zavatra tsy hay na tsy azo tenenina toy ny Zen .
Nanazava ny hevitr'i Google araka ny fijeriny i Andrew Lih . Tsikariny ihany koa ny tatitry ny fampitam-baovao tsy lojika sasany izay manazava ny hevitr'i Sergey Brin. Nieritreritra izy fa ny antony nitsikerana be loatra an'i Google dia satria manana fenitra avo lenta izy amin'ny fitantanana fihariana.
Nampiasa voodoo virtoaly mihitsy ny bilaogera Shinoa sasany satria tsy afaka niditra Google izy ireo. Nanao toy izany i keepwalking  ( natoron'i Rebecca ). Nokianin'i Herock Xia  ny tsy fahombiazan'ny bilaogy ofisialin'ny Google Shinoa tamin'ny firesahana ity lohahevitra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/03/107938/
 Great Firewall of China: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Firewall_of_China
 Famonoan'olona tao Tiananmen: https://www.globalvoicesonline.org/2006/06/04/china-june-4thsilence-memorial-and-bloggers-saying/
 Niverina tamin'ny laoniny: http://www.wired.com/news/politics/0,71121-0.html?tw=rss.index
 maotera Google Amerikana dika Shinoa: http://www.google.com/intl/zh-CN/
 fahatapatapahan'ny fifandraisana: http://news.ft.com/cms/s/bbc6dabe-f69d-11da-b09f-0000779e2340.html
 nahazo tsikera maro avy amin'ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona sy ny tontolon'ny bilaogy: https://www.globalvoicesonline.org/2006/01/25/googlecn-in-china/
 fantatra : http://news.ft.com/cms/s/294b51e4-f7b8-11da-9481-0000779e2340.html
 Sergey Brin, mpiara-manorina ny Google fa mety hanimba ny foto-keviny izy ireo: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/06/08/wgoogle08.xml&sSheet=/news/2006/06/08/ixnews.html
 Don't Be Evil: http://investor.google.com/conduct.html
 mijanona ao Shina ny Google: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/09/AR2006060900101.html
 nilaza nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mahazatra: http://www.donews.com/Content/200606/e3bde8bc89fb4797844e96a93f0a3c57.shtm
 Nilaza tao amin'ny bilaoginy : http://blog.donews.com/keso/archive/2006/06/09/909077.aspx
 Andrew Lih: http://www.andrewlih.com/blog/2006/06/09/google-afterword-and-strategic-ambiguity/
 natoron'i Rebecca: http://rconversation.blogs.com/rconversation/2006/06/chinese_blogger.html
 Nokianin'i Herock Xia: http://herock.net/archives/000183.html